TACSI GEERIDA PROF. MOXAMED XAASHI DHAMAC (GAARIYE)
PROF. MOXAMED XAASHI DHAMAC (GAARIYE) ka tegay meel kasta oo ay joogaanba . Sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa shacbi weynaha Somaliland iyo Soomali oo dhan, gaar ahaan gobalka Maroodijeex ee uu ka soo jeeday.
PROF.GAARIYE, waxuu ahaa taariikh socota.
Waxuu ahaa macalinka dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed, abwaan ummadeed oo bari, galbeed , koonfur iyo waqooyi carada Soomaalieed ee shanta ah iyo qurbahba ka ah bidhaan si cad u ifrtiimeysa. Geesi aan hadalka la gaban, garyaqaan xaqqa ku addima, nin weedhiisu tuf leedahay oo carabkiisu damqo daalin kasta oo dadkiisa duudsiye, nin ereyga uu yidhaahdaa ka nixiyo inta aan dadkooda u damqan, nin aamin san xorriyada afkaarta qoraal iyo hadalba. Nin tilmaama oo toosiya madaxda kuna soo rida tubta toosan iyo dariiqa wanaagsan. Waxuu ahaa fariin yuururta oo il dheer, nin u damqada danyarta iyo qofka dulman. Waa nin galay taariikha Soomaaliyeed oo qalin dahab ah lagu qoray, gabaayaa iyo maansoyahan, ku caan baxay cilmiyeenta afka Soomaliga, miisaan iyo higaad, xarakeyn iyo cabiraadba. Waxuu ka mid yahay tirada yar ee Soomali isku raacdya abwaanimadiisa, ayna xusi doonaan jiilasha soosocda fac ilaa fac.